Fikarohana momba ny firaisana Dr. Anthony Fauci ho Reincarnation Dr. Thomas Tuttle: Mpikababo an'ny valan-jaza amin'ny fiainana roa - Fikarohana Reincarnation
Proposed by: Alex Knapp (amin'ny fironana)
Anthony Fauci sy Thomas Tuttle
Raha tany Etazonia no niatrika ilay areti-mifindra COVID-19 tamin'ny 2020, Alex Knapp, tonian-dahatsoratra zokiolona ao amin'ny Forbes, dia nanoratra lahatsoratra momba ny fitoviana eo Dr. Anthony Fauci ary mpanelanelana amin'ny tazomoka vaovao hafa 100 taona lasa izay, Dr. Thomas Tuttle. Nomarihin'Andriamatoa Knapp ihany koa fa mitovitovy endrika ara-batana izy roa ary ilay lahatsoratra dia mampiseho ny sarin'i Fauci sy Tuttle mifanila.
Ny namako iray dia nampita tamiko ny lahatsoratr'Andriamatoa Knapp satria fantany fa mitory aho, miorina amin'ny porofo, fa hatramin'ny androm-piainana iray hafa dia manana endrika, toetra, talenta ary asa mitovy amin'izany izahay. Araka izany, voajanahary ny manontany tena raha Dr. Fauci no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Dr. Tuttle.
Ian Stevenson, MD sy ny porofon'ny Reincarnation
Ny porofo tsara indrindra ho an'ny reincarnation dia avy amin'ny asan'i Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny University of Virginia. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Ireo tranga fahatsiarovana ny fiainana amin'ny alalàn'ny fahazazanana efa narotsak'i Ian Stevenson, MD
Porofo sy fitsipiky ny Reincarnation
Dr. Fauci dia voamarina fa Reincarnation Dr. Dr. Tuttle
Niara-niasa tamin'ny medium medium Kevin Ryerson isam-bolana aho hatramin'ny taona 2001. Naseho tamin'ny bokin'i Shirley MacLaine efatra i Kevin ary nilalao ny sarimihetsika izy. Sahy maka risika. Kevin dia nampita fanahy antsoina hoe Ahtun Re izay naneho ny fahaizan'ny fanaovana ny lalao tamin'ny lasa miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta.
Taminà andiany iray nifanaovana tamin'i Kevin tamin'ny 30 aprily 2020, nanamafy i Ahtun Re fa ny Dr. Anthony Fauci no reinkarnation an'ny Dr. Thomas Tuttle.
Ny iray amin'ireo tranga fanovana ny reincarnation ity dia ny fiandronan'ny Tuttle sy Fauci mandritra ny roa taona, toy ny nahafatesan'i Tuttle tamin'ny 1942, raha i Fauci dia teraka tamin'ny 1940. Noho izany, ity dia tranga tsy fahita fironana, izay misy fanahy mamelona vatana roa mandritra izany fotoana izany. Raha hijery ireo tranga hafa ireo, ao anatin'izany ny tranga trangam-bika nisaraka tamin'ny fikarohana tao amin'ny University of Virgina, azafady, alaivo:
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny asako miaraka amin'i Kevin, azafady aleha:
Ryerson-Semkiw Reincarnation Sessions Research Sessions
Raha hijery tranga hafa misy mpahay siansa, azafady, alaivo:
Avelao aho hizara ny lahatsoratr'i Mr. Knapp mahafinaritra, izay tsy maintsy lazaiko fa nitaky fikarohana be dia be. Ho an'ny fahafinaretana feno, ao anatin'izany ny sary mahafinaritra, azafady vakio ity lahatsoratra ity amin'ny Forbes tranonkala:
Ny Dr. Fauchi an'ny Flu Espaniola tamin'ny 1918, nataon'i Alex Knapp-Forbes
Andininy lahatsoratra: Maherin'ny iray taona lasa izay, ny premiemistista Dr. Thomas Tuttle dia nanisy marika ny saron-tava sy ny fitsidihana ara-tsosialy mba hampihenana ny aretin'ny valanaretina. Nanao fahavalony be dia be izy - saingy niasa ilay izy.
Tamin'ny Janoary 1919, dia nanentana ireo mpanao lalàna tao an-drenivohitra, Olympia, ny komisiona momba ny fahasalamana any Washington, mba hametraka fepetra hentitra hanohitra ny fihanaky ny gripa espaniola, izay vao avy namarana onjam-peo nahafatesana tany Amerika. Ny fameperana arosony dia misy ny fandrarana ny dihy sy ny fiaraha-mientana ara-tsosialy hafa, ary koa ny fetran'ny olona afaka manatrika fivoriana am-pahibemaso sy ny halaviran'izy ireo tokony hipetraka. Samy nifidy nanohitra ireo fepetra ireo ny tanàna sy ny distrika. Ho valin'izany, dia nitady ny Birao nasionaly momba ny fahasalamana ny vaomiera mba hampiharana ny fahefan'ny polisy manoloana ny vohitra.
Tsy niasa kosa izy.
Ny tompon'andraikitra iray momba ny fahasalamam-bahoaka dia voaroaka noho ny fepetra fitsangatsanganana tsy ara-tsosialy mandritra ny areti-mifindra iray dia misy feo manelingelina ankehitriny, raha toa ny mpitondra ny mpandraharaha sy ny mpanao politika dia manohitra ny fameperana napetraky ny manampahefana mba hanana ny valan'aretina COVID-19. Saingy ny fetrany ihany no nahatonga ny Seattle sy ny tanàn-dehibe sasany tany Washington hiaro ny tenany amin'ny gripa espaniola - ary ny hetsika toy izany koa dia nanampy an'i Kansas hanana onjam-pitondran-tena tamin'ny fararano tamin'ny 1919.
Tao afovoan'ny ezaka ara-pahasalamam-bahoaka tany amin'ireo fanjakana roa ireo dia mpahay siansa nahomby sy tsy nisy dikany: izay ny Dr. Thomas Dyer Tuttle, izay nanjary natanjaka, raha polarizing, namboarina tamin'ny ady tamin'ny gripa espaniola, fa tsy toa an'i Dr. Anthony Fauci. anio, amin'ny ady atao amin'ny COVID-19.
Ankoatry ny fifampitoviana ara-batana, dia samy niady tamin'ny pandemika manerantany ny Dr. Tuttle sy ny Dr. Fauci fa tara amin'ny fikarakarana ara-pahasalamam-bahoaka lava sy ny fandanjalanjana ny siansa sy ny sosiolojia. Samy nanatrika sekoly ara-pitsaboana Ivy League izy roa ireo. Samy mpiandraikitra natolotry ny Serivisy Amerikanina momba ny fahasalaman'ny daholobe izy ireo. Ary samy nanana traikefa tamin'ny valan'aretina teo aloha izy ireo. I Fauci no nalaza voalohany tamin'ny taona 1980 ka ilay mpikaroka malaza momba ny SIDA ho an'ny Ronald Reagan sy i George HW Bush. Ho an'i Tuttle dia fiverenan'ny lozabe indray tamin'ny fiatrehana ny taonjato faha-20.
Teraka tany Fulton, Missouri, i Tuttle tamin'ny 1869. Zanaky ny mpivaro-tena iray izy izay nanambady harena - ny fianakavian-dreniny, araka ny tantara iray teo an-toerana, dia nanana trano iray manodidina ny ampahefatry ny sisan-tanàna. Nahazo ny mari-pahaizana bakalorea tao amin'ny Kolejy Westminster teo an-toerana (izay hanafan'i Winston Churchill ilay lahateny malaza "Iron Curtain" 56 taona teo ho eo taorian'ny nahazoany diplaoma ny Dr. Tuttle). Avy eo i Tuttle dia nifindra tany New York City tamin'ny taona 1889 mba hahazoany mari-pahaizana ara-pitsaboana amin'izay antsoina hoe Columbia College tamin'izany fotoana izany.
Nandritra io taona voalohan'ny sekoly ara-pitsaboana io, dia tsy nahita an-tsitrapo izy teo afovoan'ireo iray amin'ireo fihanaky ny gripa maty farany indrindra, ilay antsoina hoe "gripa Rosiana", izay nahafaty olona an'aliny tao Eropa izay nianjera ary tonga tany New York tamin'ny Desambra. Ny tratran'io grama io dia hiafara amin'ny fahafatesan'olona maherin'ny 2,500 1890 tany New York alohan'ny hisian'ny volana febroary XNUMX.
Rehefa nahazo diplaoma tao Columbia tamin'ny 1892 i Tuttle dia niasa tao amin'ny hopitaly Mount Sinai any New York. Niverina tany Missouri izy taty aoriana, ary nanambady an'i Lucile vadiny, tamin'ny 1896. Nifindra tany Montana ny mpivady taona vitsivitsy taty aoriana, ary nitady asa ara-pitsaboana i Tuttle ary lasa Sekretera sy Mpitandrina ho an'ny Birao Momba ny Fahasalamana tamin'ny taona 1903.
Tao anatin'io andraikitra io no nianarana voalohany ny Dr Tuttle mba hanome lanja ny siansa noho ny fiheveran'ny besinimaro ny besinimaro. Tamin'ny 1909, Tuttle dia nanao loham-pianakaviana tao amin'ny gazety Montana teo an-toerana - tamin'ny fomba mahatsikaiky manohitra ny fampakaram-bady - betsaka amin'ny fanakorontanana imasom-bahoaka. Tao anaty fiandohan'ny taona 1900 no nanapotehany ny vahoaka, fa ny hevitr'i Dr. Tuttle ao ambadik'ilay baiko dia ny hoe ny fisintonana quantine dia hampirisika ny olona hanao vaksiny. (Tamin'ny taona 1905, ny raharaha Fitsarana Tampony Jacobson miady amin'i Massachusetts Ny fahefana manohana ny fanjakana dia mitaky vaksiny kely ho an'ny fahasalamam-bahoaka.) Ny Tuttle sy ny biraon'ny fahasalamam-panjakana dia nampiroborobo ny vaksiny tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo maimaim-poana ary amin'ny alàlan'ny famelana bokotra kely vita amin'ny Tuttle hanampiana ny tombony. Ireo torolàlana ireo dia nahitana teny maranitra ho an'ireo mpanohitra ny andro:
"Ny finoana mafy ny mpanoratra fa ny fomba mahomby indrindra hanafoanana ny tasy mikitroka amin'ity firenena ity dia ny fampitandremana mandritra ny volana vitsivitsy, mba hananan'ny rehetra fotoana hanaovana vaksinim-pahombiazana," hoy ny nosoratan'i Dr. Tuttle. "Ary avy eo avelao ny tranga mikitroka izay miseho miseho malalaka, tsy misy famonoana otrikaretina, ka izay tsy vita vaksiny dia voan'ny aretina ary vitaina miaraka aminy. Ny fihetsika toy izany dia hiteraka 'fiovan'ny fo radical' ataon'ny maro, raha tsy izy rehetra, 'anti-vaccinationists.' ”
Tamin'ny taona 1915, tamin'ny fanaraha-maso madinika ny fanaraha-maso any Amerika, ny Dr. Tuttle dia nanaiky toerana vaovao ho kaomisera ara-pahasalamana ao Washington. Telo taona taty aoriana, tamin'ny Jolay 1918, dia tonga teo amin'ny fanjakana ny gripa espaniola. Ny andiam-panafody voalohany dia namely ny tobin'ny tafika ny Tafika, izay nahitana tranga 300 mahery. Hoy ny mpahay tantara atao hoe Gwen Whiting, rehefa nandeha ny fahavaratra.
Saingy nanomboka niondrana indray ny isa tamin'ny volana septambra, ka nanjary voakasik'ilay onja faharoa ny tompon'andraikitry ny fahasalamam-bahoaka. Ny Vaomieran'ny Fahasalamam-panjakana dia nihaona tamin'ny faran'ny volana septambra mba hiresaka momba ny ahiahy momba ny gripa, ary taorian'ny fihaonana dia niteny tamin'ny gazety iray i Tuttle mba hampitandremana ny olom-pirenena fa hiverina ny gripa. Noho ny fetra eo amin'ny fahefan'ny Birao nasionaly momba ny fahasalamana, tsy afaka nanatanteraka baiko maro ny Dr Tuttle hatramin'ny Novambra, hoy i Whiting. Saingy nampiasa ny toerany izy mba hamporisihana ireo manampahefana ao an-toerana mba hanambara fepetra hentitra misy ny valanaretina tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra.
Ny Dr. Tuttle, izay nipetraka tao Seattle, dia niara-niasa akaiky tamin'ny kaomisera momba ny fahasalamana teo an-toerana, ny Dr. JS McBride, mba hitantana ny fomban'ny tratran'ny gripa. Nampihetsi-po ny tratran'ny gripa marary an-jatony tao amin'ny tobim-piofanana an-dranomasina teo akaiky teo, dia nanambara i Tuttle fa efa tonga tao an-tanàna ny gripa espaniola. Na ny ben'ny tanàna McBride sy i Ole Hanson, Seat Hans, dia nandray andraikitra haingana ho setrin'ny torohevitra avy amin'i Dr. Tuttle.
Eritreritra sy fivavahana: Rehefa avy nanidy ny fiangonan'i Seattle tamin'ny 1918 dia hoy ny Ben'ny tanàna Ole Hanson: "Tsy mendrika ny fivavahan-droa izay tsy hitandrina mandritra ny roa herinandro."
Tamin'ny 5 Oktobra 1918, ny Ben'ny tanàna Hanson dia nanatanteraka ny fepetra hanafoanana ny valanaretina tao Seattle. “Nakatony ny fiangonana. Nakatony ny toerana azon'ny besinimaro izy. Nampakatra onitra mihitsy aza izy ireo mba handorana ny sisin-dalana, ”hoy ny fanazavan'i Whiting. “Mety ho voasazy ianao raha toa ka tsy manao sarontava handehanana eny an-dalambe. Ireo fameperana hentitra rehetra ireo dia natao tao Seattle. Ary nisy tanàna hafa nanaraka izany. ”
Nandritra izany fotoana izany, ny Dr. Tuttle dia nitondra gazety mba hanaparitaka ny toro-hevitra momba ny fahasalamana - mandefa taratasy any amin'ny tsenan'ny mpanao gazety, nanambara fa ny fisorohana dia mety ho voasakana tsy ho voan'ny areti-mifindra miaraka amin'ny "fanampiana faran'izay mazoto sy misaina ary manan-tsaina ho an'ny olom-pirenena rehetra ao amin'ny Fanjakana" aorian'izay Fampitandremana efa mahazatra: Aza mihetsiketsika na mikohaka eny an-tananao, mialà amin'ny olona, ​​ary mijanona ao an-trano raha misy soritr'aretina ianao.
Tahaka ny valanaretina COVID-19, ny valin'ny gripa espaniola tany Seattle, Spokane ary ny tanàna sasany any Washington dia nisy fitoviana nanerana ny firenena. New York, Saint Louis ary Los Angeles koa dia nahita fahombiazana tamin'ny alàlan'ny fampiasana fepetra raisina ho an'ny daholobe, raha toa kosa ny tanàna toa an'i San Francisco sy Philadelphia dia somary voafetra ihany ary mahita ny fitomboan'ny tratry ny gripa vokatr'izany. Saingy ny tahan'ny taham-pahafatesana avo lenta koa dia tokony, noho ny ampahany satria tsy dia malaza ny fepetra henjana fotsiny. Na tao Seattle aza, "be ny fihetsiketsehana" noho ny famerana ny fahasalamam-bahoaka, hoy i Whiting.
Na dia nanome torohevitra an'ireo manam-pahefana teo an-toerana aza i Dr. Tuttle, dia nahavita nanao fihetsika kokoa izy rehefa nitombo ny gripa. Tsy namoaka fehin-kiraro mihitsy izy, ohatra, satria ny Etazonia Surgeon General dia nanoro hevitra momba izany. Namoaka didim-pitsarana ihany koa izy mba hitafy saron-tava ho an'ny daholobe aorian'ny Andro Armistice tamin'ny Novambra 1918 - ampahany satria tsy manaraka izany akory ny olom-pirenena. Ny fiafaran'ny Ady Lehibe Faharoa dia nahita ny fihenan'ny fameperana ara-pahasalamana ao Seattle. Saingy tonga amin'ny vidiny izany. Tamin'ny voalohan'ny volana Desambra, niverina ny gripa. Na dia tamin'ity indray mitoraka ity aza, fa tsy nandrara ny fivoriam-bahoaka akory dia nasaina nijanona tao an-tranony ny olona voan'ny tratry ny gripa.
Tamin'ity volana ity dia nandeha nankany Chicago i Dr. Tuttle nandritra ny valan-dresaka nasionaly an'ny American Public Health Association natokana hiadiana amin'ny aretina, ary io fivoriana io dia toa nanamafy ny fahatapahan-keviny ho vao haingana kokoa. Mety ho faran'izay mazàna ny Tuttle tamin'ilay valan'aretina, saingy nanomboka natezitra bebe kokoa noho ny tsy fahampian'ny fampiharana ny lalàna momba ny fahasalamam-bahoaka izy. Ny tatitra momba ny fahasosorana an'i Tuttle dia nitatitra ny nomaniny taorian'ny vanim-potoana, ary izy taty aoriana dia nofaritan'ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny maha-izy azy "ho an'ny sekoly olom-pirenena taloha izay mino ny lalàna sy ny fitsipika natao."
"Izay nandevina ny havany tamin'ny ririnina farany dia tokony hanome vola ny ezaka rehetra hisorohana ny hafa hiatrika izany mitovy aminy," hoy ny Dr. Tuttle tao amin'ny taratasy Topeka tamin'ny 11 septambra 1919. Nanoratra taratasy ho an'ny kaomisera momba ny fahasalamana any amin'ny distrika koa izy, nanentana ny fampiharana mafy ny quarantines. Na dia tsy noheverina ho anisan'ireo areti-mifindra amin'ny espaniola aza i Kansas dia nahita tranga tratry ny gripa tamin'ny ririnina tamin'ny 1919-20, ary nanao ny tsara indrindra i Dr. Tuttle mba hiantohana ny fiarahamonina eo an-toerana.
Na eo aza ny asa nataony mba hamonjy aina any Washington sy any Kansas, dia mazava fa tsy nino i Tuttle momba ny fahafahan'ny fireneny hiomana amin'ny areti-mandringana manaraka. "Raha ny zava-misy dia fantatsika kely fotsiny ny momba ny etiology sy ny epidemiolojia ny gripa ankehitriny, araka ny fantantsika roa taona lasa izay," hoy izy nanoratra tao amin'ny tatitra iray, "ary noho ny fironan'ny governemanta (tanàna, faritany, ny fanjakana sy ny firenena) mba hanome vola ho an'ny fandidiana raha tsy eo ny aretina, ary hampiato tanteraka ny fanohanana na inona na inona amin'ny fandalinana ny epidemiolojia ny aretina aorian'ny fandalovan'ny valanaretina iray, dia tena azo inoana fa hihaona amin'ny valanaretina manaraka isika ( angamba 20 na 30 taona taorian'izay) tsy dia nahalala firy momba ny tena aretina tahaka ny taminay fony niatrika ilay valanaretina tamin'ny fararanon'ny 1918. ”
Roa taona taty aoriana, nametra-pialana ny andraikiny i Kansas, izay nilaza fa mila karama bebe kokoa izy ka nahafahany nandoa ny fianarany zanany. Tao anatin'ny tatitra andavanandro azy dia nitomany ny fialany ny Birao momba ny fahasalamana ary nanentana ny fampitomboana ny mpanao lalàna ny karama amin'ny asa mba hahazoana antoka fa "lehilahy manana ny kalitao sy manofana ny fanirian'i Kansas."
Ny asany manaraka dia nitondra an'i Dr. Tuttle niverina tany Montana hanomboka hopitaly veteran tao Fort Harrison, izay mbola misy ankehitriny. Nifindra tany Chicago izy avy eo mba hanao fitsaboana. Tamin'ny 1933, dia nandeha nisotro ronono tany San Diego izy sy ny vadiny, izay nandanian'i Dr. Tuttle ny taonany volamena nandritra ny fanisam-bato tamin'ny 1940, dia nanamarika tamim-pitandremana ny asany ho "orchidista" izy tamin'ny fidiram-bolan'ny zero - talohan'ny nandehanana tamin'ny 1942.
Hevitra faharoa: Tahaka ny fepetra hentitra nataon'ny Dr. Tuttle, ny toro-làlan'i Dr. Fauci dia tsy dia malaza foana.
Efa ho 80 taona taorian'ny nahafatesan'i Dr. Tuttle, niaina ny lovan-tsofiny tamin'ny ady tamin'ny onjam-peo, izay mety ho gaga azy, noho ny fahatahorana izay nolazainy tamin'ny androm-piainany. Tamin'ny 2009, vondrona mpikaroka dia nanoratra taratasy iray mampitaha ireo torolàlana CDC misy eo amin'ny fitantanana ny pandemika amin'ireo izay novolavola nandritra ny gripa espaniola. Ny taratasy dia nanamarika fa ny fangatahana rehetra, ny fepetra nataon'i Dr Tuttle nampiroborobo - namporisika ny fanakatonana ny toerana ho an'ny daholobe sy ny fitsangantsanganana ara-tsosialy — dia mbola manan-danja amin'ny ady amin'ny areti-mifindra ankehitriny. Ny tatitra dia nitanisa ny tsikaritra ihany tamin'ny fihaonana tamin'ny 1918 Desambra niatrika ny Dr. Dr Tuttle talohan'ny nanamafisany ny fepetra ara-pahasalamana avy any draconiana.
Iray amin'ireo mpiara-miasa amin'ity taratasy 2009 ity?